बर्मी टोफु वा छोला टोफु - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
बर्मी टोफु वा चना टोफु
सुरूवात1047 मिनेट२ - people व्यक्ति50२ क्यालोरी
यहाँ मेरो भर्खरको आविष्कार गरिएको छ: बर्मी टोफु वा छोला टोफु। पक्कै पनि तपाईहरु मध्येका कोही रमाईलो गर्दै हुनुहुन्छ सबोर तर मेरो लागि यो एक वास्तविक नवीनता हो।
यो वास्तवमै tofu उचित छैन, योaबीचको आधा बाटो हो पनीर र एक पोल यो व्यंजनहरु को खोज को लागी को लागी एक शानदार विकल्प हो सोया बिना वा केवल उनीहरूको लागि जो आश्चर्यजनक र बहुमुखी तयारीको साथ आफ्नो बुकबुक विस्तार गर्न चाहन्छन्।
बर्मी टोफु धेरै पौष्टिक छ किनभने यो बनेको छ छोला र यति सजिलो छ कि यो गर्न पनि हास्यास्पद छ। यो पनि धेरै फैलन्छ र संकेत मात्रा संग, धेरै सर्विंगहरु बाहिर आयो कि हामी प्रयोग गर्न सक्छौं जस्तो कि यो सामान्य टोफु हो; सलादमा, ग्रील्ड, sautéed तरकारी संग र करी मा पनि।
एक पटक सकिएपछि टोफुले एक हप्ता सम्म समात्छ। हामीले यसलाई फ्रिजमा कडा बन्द बन्द कन्टेनरमा राख्नु पर्छ।
1 बर्मी टोफु वा चना टोफु
चनाको साथ बनाउनको लागि सजिलो तयारी।
सेवाहरू:3- 4
तयारी समय: 17H
२०० ग्राम कच्चा छोला
१ 1000० ग्राम पानी
१ स्तर चम्चा (डेजर्ट आकार) नुन
१/२ चम्चा (मोचा साइज) हल्दी
१/२ चम्चा (मोचा साइज) भुइँ जीरा
तेल मोल्ड ग्रीस गर्न
हामी चिसोको बखत कुचोल्छौं २ मिनेट, प्रगतिशील गति 2-5-१०। सुरुमा यसले ठूलो आवाज निकाल्छ तर एकैचोटि चुच्यो भने बहरा आवाज बन्द हुन्छ।
ढक्कन खोल्नु अघि हामी यसलाई केहि सेकेन्ड आराम गर्न दिन्छौं। हामी छोलेको पिठोलाई ब्लेडमा कम गर्छौं र पानी खन्याउँछौं। हामी हटाउँछौं Seconds सेकेन्ड, गति 10। र हामीले त्यसलाई रातभरि एउटै गिलासमा राख्यौं।
भोलिपल्ट, सामग्री धेरै हल्लाएको बिना, हामीले g०० g पानी त्याग्यौं। यदि तपाईंसँग स्केल छैन भने के गर्न सक्नुहुन्छ 400 कप भर्न र त्यो पानी फाल्नुहोस्।
हामी बाँकी पानीलाई ठूलो भाँडामा हालिन्छौं तर मात्र पानी। काँच खाली भएपछि हामी हेर्नेछौं कि तल हामीसँग एक किसिमको माटो छ, जो छोप्प्राको पीठोले बनेको छ, जसलाई हामी अर्को कचौरामा खाली पार्छौं।
सिसा नधोईकन, हामी फेरि पानीमा डुबाउँछौं जुन फेरि भित्र छुट्टिन्छन्। हामी यसको लागि ताप दिन्छौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
समय पछि, हामी अर्को कचौरामा भएको पिठो "माटो" थप्छौं, नुन र मसलाहरू। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, गति १। समय बित्दै जाँदा, मिश्रण गाढा हुनेछ र ध्वनि पनि परिवर्तन हुनेछ जब हामीले पेस्ट्री क्रीम वा बचेल बनाउँदा।
यस बीच, हामी तेल संग एक विशाल मोल्ड तेल। समयको अन्त्यमा, हामी गिलासका सामग्रीहरू मोल्डमा हाल्छौं र सतहलाई मिठो बनाउँदछौं कि यो सकेसम्म सहज हुन्छ। यो अपरेशन द्रुत रूपमा गर्नुपर्नेछ किनभने मिश्रण छिटो ठोस हुनेछ।
Hours घण्टाको लागि चिसो हुन दिनुहोस्। त्यसो भए हामी यसलाई अनमल्ड गर्न र यसलाई इच्छित आकारको वर्गमा काट्न सक्छौं।
थप जानकारी - कच्चा शाकाहारी चीज
स्रोत- थर्मोमिक्स बडाजोज
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: Celiac, सजिलो, तरकारीहरू, भेगन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » सजिलो » बर्मी टोफु वा चना टोफु
कस्तो चाखलाग्दो नुस्खा !!
मलाई लाग्छ कि म यो गर्न जाँदैछु, तर मसँग एक प्रश्न छ।
जमिनमा पानी छुन, यो फ्रिज मा आराम गर्न बाँकी छ? वा थर्मोमिक्सको गिलास भित्र?
यो मेशिनमा राखिएको गिलासमा छोडियो। फ्रिजमा होईन।
एक पटक सकिएपछि टोफू कडा बन्द कन्टेनरमा फ्रिजमा भण्डारण भएको एक हप्ता सम्म रहनेछ।
मोनिका बालागुअर भन्यो
मसँग एउटा प्रश्न छ, के यो थर्मामिक्स गिलास भित्र नेवामा आराम गर्न अनुमति छ, वा फ्रिज बाहिर?
मोनिका बालागुअरलाई जवाफ दिनुहोस्
ओह! स्पष्टीकरण को लागी धेरै धन्यबाद !!!
एन्जलस बारेडो रिएलो भन्यो
मसँग पनि त्यो प्रश्न छ। हेरौं कि उनीहरूले उत्तर दिए
। र यो कति लामो हुन्छ?
एन्जलस बार्रेडो रिएलोलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई धेरै धेरै धन्यबाद।
भिक्टोरिया फर्नान्डेज भन्यो
भिक्टोरिया फर्नांडीजलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, र यदि छोलाको सट्टा तपाईं पहिले नै चिसोको पीठो प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, के त्यो समान छ?
बिक्रीमा जवाफ दिनुहोस्
निश्चित गर्नुहोस् कि यो १००% चनाको पीठो हो र यसले प्रिजरभेटिभहरू, इन्ट्रेनरहरू वा त्यस्तै केही समावेश गर्दैन, ठीक छ?
मलाई टोफु मनपर्दैन, एकचोटि मैले किनें र एग्रिग गरे ...
तर यो छोलेको साथ यदि म गर्छु भने पक्कै हो।
केवल एक प्रश्न, म कसरी क्यालोरीहरू मूल्या rate्कन गर्न सक्छु? म आहारमा छु ... उनीहरू परामर्शदाता भएता पनि।
यी व्यंजनहरु को लागी धन्यबाद जुन थर्मोमिक्स लाई लाभदायक बनाउँदछ।
Núria-52 लाई जवाफ दिनुहोस्
कुल रेसिपीमा करीव २०० kcal हुन्छ। मैले संकेत गरेको रकमको साथ, ती or वा serv सर्भिंगहरूको लागि बाहिर आउँदछन्, तपाईं प्रयोगको प्रयोगमा निर्भर गर्दै। त्यसैले यो नुस्खा तपाइँको आहार को लागी उपयोगी हुनेछ।
धेरै धेरै धन्यबाद, मायरा।
Conchi Sanchez Gonzalez प्लेसहोल्डर छवि भन्यो
र कसरी तपाईं यसलाई कच्चा खानुहुन्छ? धन्यवाद
Conchi Sanchez Gonzalez लाई जवाफ दिनुहोस्
रेसिपीले भने जस्तै यो सामान्य टेफू जस्तो देखिन्छ, सलादमा, ग्रील्ड गरिन्छ, जस्तो तपाईंलाई मनपर्दछ!
शुभ प्रभात, म यो जान्न चाहन्छु कि यो चना पूर्व हाइड्रेटिंग द्वारा गर्न सकिन्छ, फलाफेलको लागि। मलाई लाग्छ कि यसले प्रक्रियालाई सजिलो बनाउँदछ किनकि पास्ता सीधा बनाउन सकिन्छ।
सिद्धान्तमा, यो विचार मलाई धेरै राम्रो लाग्दछ तर म तपाईंलाई आश्वस्त पार्न सक्दिन कि यसले काम गर्दछ किनकि मैले यो कहिल्यै प्रयास गरेको छैन।
यदि तपाईं नुस्खा परिवर्तन गर्न को लागी हिम्मत, हामीलाई एक टिप्पणी दिनुहोस्। त्यसो भए हामी सबै सिक्छौं!
खाजाको लागि स्प्याज केक
एबर्जिन र कद्दूको साथ पास्ता